Loharanon'ny hery miasa mangina araka ny fahamarinana
"Fa raha izany, dia hiposaka tahaka ny fahazavan’ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananoo; ny fahamarinanao ho loha-làlanao, ary ny voninahitr'i Jehovah ho vodi-lalanao." - Isa. 58:8.
Manana asa manokana hataontsika isam-batan'olona Andria¬manitra. Araka ny hitantsika fa ny faharatsian'izao tontolo izao dia aseho miharihary eo amin'ny fitsa¬rana sy aparitaka amin'ny gazety isan'andro, aoka isika hanatona akaiky an’Andriamanitra, ary tazony amin'ny finoana velona ny teny fikasany mba hiseho amintsika ny fahasoavan'i Kristy. Mitondra hery miasa mangi-na eto amin'izao tontolo izao isika dia hery maherv vaika (...) Tokony hifantoka amin'ny voninahitrAndriamanitra ny masontsika. Tokony hiasa isika miaraka amin'ny faharanitan¬tsaina rehetra nomen'Andriama¬nitra antsika, mametraka ny tenantsika eo amin'ny fantson'ny fahazavana, mba ho tonga ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra ka hamolavola sy ham¬boatra antsika ho amin'ny fitoviana amin'Andriamanitra. Miandry ny lanitra mba hanolotra ny harem¬pitahiana amin'ireo izay hanokana ny tenany hanao ny asan’Andriama¬nitra amin'izao andro farany amin'ny tantaran’ny tany izao.
Tsy misy zavatra mikasika ny tenantsika ka ahafahantsika mitaona ny hafa ho amin'ny tsara. Raha tsapantsika ny tsy faha¬vitantsika ny tenantsika sy ny filantsika ny herin'Andriamanitra, dia tsy hatoky ny tenantsika isika. Tsy fantatsika izay ho vokatry ny andro iray, ora iray, na izay ho
vokatry ny fotoana iray, koa ny andro tsirairay dia hatombotsika amin'ny fanolorana ny fiainan¬tsika manontolo amin'ilay Raintsika any an-danitra. Voatendry hiambina antsika ny anjeliny, raha toa mametraka ny tenantsika eo ambany fiarovany isika, amin'ny fotoanan'ny loza tsirairay avy dia ho eo an-kavanantsika izy. Amin' ny fotoana tsy tsapantsika akory fa tra-doza mety hitondra hery miasa mangina ratsy isika, dia ho eo anilantsika ny anjely, hitaona antsika ho amin'ny tsara kokoa, hisafidy ny teny hataontsika, ka hanitsy ny fihetsitsika. Mety ho am-pahanginana ny hery maha¬taona avy amintsika, tsy noeritre¬retina, kanefa hery lehibe hitaona ny hafa ho eo amin'i Kristy sy ho any an-danitra.
Mahery ny hery miasa mangina avy amin'ny isam-batan'olona. Natao hiara-miasa amin'ny herin'i Kristy izany, hanandratra ny toerana izay isandratan'i Kristy, hampita ireo foto-kevitra marina, ary hampi¬tsahatra ny faharatsian' izao tontolo izao. Ny hery miasa mangina avy amintsika no hanambara ilay fahasoavana izay Kristy irery ihany no afaka hanome azy. Ary mbola hanandratra sy hanamamy ny fiainana ary ny toetran'ny hafa amin'ny alalan'ny herin'ny ohatra madio noho ny finoana tsotra sy fitiavana.